ဖေ‌ဖျောဝါရီ 10, 2020 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျွန်မချစ်သူခြေထောက်မှာ ငါးမျက်စိအဖုလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဆေးစားလို့ရလား။ သူကတော့ ခွဲရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲဆိုတာရယ်။ ဘယ်လိုသတိပြု နေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါရှင့်။ ဟုတ်တယ်။ “ငါးမျက်စိ” လိုမျိုး လူတော်တော်များများ ဖြစ်ကြတယ်။ မနေ့ကတောင် ဆရာ့ဆေးခန်းလာပြတာ ၂...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေမှာ အစားအသောက်ကို ကယ်လိုရီ တွက်ချက်စားသင့်ပါသလား၊ အဲဒီလို စားတာက ဆီးချိုထိန်းနိုင်ပါသလား။ KMM(FB) A. ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါရှိသူတွေမှာ အစားအသောက်ကို ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီး စားသောက်တာက ဆီးချိုထိန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်လိုရီတွက်ချက်ပြီး...
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကျွန်မ၏ ဘွားဘွားသည် အသက်(၉၂)နှစ် ရှိပါပြီ။ သူ့တွင် သွေးတိုးရောဂါနှင့် ခြေထောက်တစ်ဖက် သွေးကြောပိတ်ရောဂါ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ခြေထောက်တစ်ဖက် သွေးကြောပိတ်မှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ကုသခဲ့ရပါသည်။...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၁၉၉၂ခုနှစ်က အမျိုးသားအားကစားပွဲတော် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) မီတာ ၁၀၀-၂၀၀ အပြေးပြိုင်ပွဲတွင် လက်ရွေးစင် အားကစားသမားဖြစ်ခဲ့သူ၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဘောလုံးလက်ရွေးစင် အားကစားသမားဖြစ်ခဲ့သူ၊ ၁၉၉ရ ခုနှစ် Royal Fc ကလပ်အသင်း ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သူ၊ ထို့ပြင်...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ဆရာရှင့် . . သမီးအဒေါ်က နှာခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လည်ပင်းမှာလည်း အကျိတ်တွေ ထွက်လာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခု ဓာတ်ကင်နေရတာလို့ ပြောပါတယ်။ သမီးသိချင်တာက နှာခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရေးပေးပါလားရှင့်။ သမီးသိချင်လို့ပါ၊...